Umqondo ukukhombisa izwe sibalo weza mathupha ekhanda futhi ngaphezulu noma eminyakeni engaphansi kwengu-60,000 edlule. art lwasekuqaleni yahlakazeka cishe kuwo wonke amazwekazi, ngaphandle Antarctica, futhi ngasinda kuze kube kulesi sikhathi samanje izizwana abahlala emakhoneni kakhulu elikude lomhlaba.
Kwazi bani ukuthi izizathu kwakungamadodana eyaholela ekwakhiweni kwaleli robhothi yomuntu bakudala, wathatha esandleni sakhe okwamanje ucezu Clumsy amalahle, eseqala odongeni emhumeni wakhe? Lawa kwakungewona izithombe, ehoshiweyo ipensela, base elula zeJiyomethri futhi wabuka besikhumba saleso silwane. Mhlawumbe lempi Umbala umzimba baba isinyathelo sokuqala kakhulu lokusungula wawobaba, futhi, mhlawumbe, le ndoda yabona emthunzini wakhe, wanquma ukuthuthela isithombe phezu kwedwala. Kwazi bani ... Ukuma ajwayelekile itshe kungase abaphoqi umqophi bakudala ukuze uyidale kusukela ngalé wesilwane. Ungakwazi ukwakha eziningi kokuqagela izikhathi, kodwa kukhona into eyodwa obungenakuphikwa: ukubaluleka Umdwebo kanye Umdwebo yomuntu bakudala ngokukhulumisana nontanga, kanye nokudluliselwa kolwazi namakhono lokuxoxela izizukulwane ezizayo.
Ngo intuthuko engokomoya isintu lokusungula amathuluzi yomuntu bakudala futhi isifiso sakhe ukuba baveze imizwa yabo ngokusebenzisa umdwebo, edlala indima efanayo emsebenzini wakhomba itshe.
Izazi kwahluka njengoba yiyiphi bakudala Fine Arts okwakufika kuqala. abantu ipensela umdwebo Namanje-ukuphila uqale ngemva kwesikhathi eside kakhulu, kodwa manje uhlala ayisebenzi ekhaya lakhe abaqhuba Umdwebo okungokwemvelo, futhi okubonisa zeJiyomethri nezimpawu. Mhlawumbe lezi izinhlobo ezimbili art avele ngesikhathi esifanayo, ngoba ngaphezu ngalezi zindlela yokukhuluma, yazama ukusebenzisa zonke izinto. Ngakho, enye izithombe zasendulo impela, incwadi yangekhulu ekuqaleni kwenkathi Paleolithic, libhekisela isigxivizo wezandla zomuntu, eyenziwe ngobumba. Kukhona futhi eziningi mihlobiso imigqa esenza atholakele, mhlawumbe, abantu basendulo kuvezwa lokho akubona phambi kwakhe, njengoba singathanda ukupenda landscape ipensela.
Kusukela ngaleso sikhathi, amanzi amaningi aye agelezela ngaphansi kwebhuloho, kodwa isifiso somuntu ukuveza imizwa yabo, imizwa, izimo, ngokusebenzisa ukudweba, ukudweba, ebaziwe isaqhubeka ibambene. Cishe zonke izingane zisencane kakhulu bafundiswa ukubamba ipeni scribble usana lokuqala - a namanje-ukuphila ipensela isithombe umama noma ubaba, isithombe esijwayelekile besikhumba saleso silwane.
Ingane izalwa benesifiso dala, futhi ngisho nalapho kungekho muntu imininingwane akatsheli kanjani ukufunda ukudweba, le ntengo isazoba uqhubeke nocwaningo yayo kule siqondiso. Njengoba umdwebo ipensela oluyisisekelo zonke ucishe onamakhono kwezobuciko ithalente ingane ngokomzwelo wemvelo ifunda yifa ofanele umdwebo ndaba. Futhi manje, esandleni sakhe sokuqala avele umdwebo amasampula ucishe yimpumelelo. Kungaba imbali endaweni vase, apula ipuleti, evalelwe: NGAMAFUPHI nje, ipensela namanje ukuphila.
imidwebo sezingane sokuqala inhliziyo amnandi abazali, kodwa uma uhlela ukuthuthukisa e ikhono lengane, isikole art uzoqala ngezinkolelo eziyisisekelo. Tshela, yiziphi amapensela, ukunikela ukusebenza ngamunye wabo, ukuchaza umehluko isicelo, kutawufundziswa ukudweba bobunjwa kakhulu elula weJiyomethri, futhi lokho lapho ingane uzokwazi ukuchitha uma engenayo ikhampasi umbuthano ngokuphelele bushelelezi, uzokutshela mayelana izimfihlakalo izimfihlo nakomagazini ipensela umdvwebo.
Futhi ukuvumela umfundi wokuqala usebenza ukuba namanje ngempela angavuthiwe, abangaphelele, kodwa kuyoba real ipensela portrait noma namanje ukuphila, zaveza yibo bonke imithetho buciko, nazo zonke izindawo ezisetshenziswa (iphepha ipenseli), kuhambisana yonke imithetho efanele.
Uyini Umfanekiso, umlando walo okwamanje
Udweba kanjani ipensela ukumamatheka ngezigaba?
Ueyd Uilson: mercenary ikhuluma Deadpool. Ilindele kwesizini ngo-2016
Antoine de Saint-Exupery: izingcaphuno. Antoine de Saint-Exupery: Biography and Creativity of a Writer of French